Ny Ra dia ranoka mitondra ny okzizena any amin'ny sela mamelona ny olombelona, ny plasma, ilay ranoka, ny tena betsaka indrindra amin'ny lafin'ny "proportion" ; misy ra daholo ny biby rehetra.
Izaraina ny diôkzizena sy ny sakafo ilain'ny "tissu" (O2) eraky ny vatana ny ilaina ny ra. Mitondra ny loto avoakan'ny "tissu" koa ny ra toy ny diôksida karbôna (CO2) na ny loto mizy nitirôzenina makany amin'ny valahana na makany amin'ny tsinay. Ilaina mitondra ny sely miaro sy manamaritaka ny hôrmôna eraky ny vatana koa ny ra.
Any amin'ny biby manan-taolan-damosinaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra&oldid=767980"
Dernière modification le 18 Aprily 2015, à 08:07
Voaova farany tamin'ny 18 Aprily 2015 amin'ny 08:07 ity pejy ity.